Mogadishu Journal » 2017 » November » 14
Mjournal :-Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa maanta la kulmay Culima’udiinka Soomaaliyeed oo uu horkacayay Sheekh Maxamed Cabdi Umal iyo guddigii dhaqaale uruurinta ka waday dalalka Kenya iyo Uganda. Madaxweyne...
Mjournal :-Weerar ismiidaamin ah oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa duhurnimadii maanta lagu qaaday Kolonyo Ciidamada AMISOM la socdeen oo marayay duleedka Muqdisho, gaar ahaan nawaaxiga deegaanka Weydow oo ku dhow KM13. Kolonyada Ciidan ayaa ku soo...
Mjournal :-Mas’uuliyiinta Soomaaliya oo kaashanaysa Bangiga Adduunka, ayaa daah furay wareegii koowaad ee maalgelinta shaqo abuurka ee Bangigu bixiyey. Sanduuqa Kobcinta hal abuurka Ganacsiga Soomaaliya (SBCF) wuxuu taageeri doonaa 150 ilaa 200 oo gacansato Soomaali ah oo ka kala...
Mareykan oo sheegtay in uu dilay 40 ka tirsan dagaalyahannada Al-shabaab iyo Daacish
Mjournal :-Wasaaradda gaashaandhiga ee dowladda Maraykanka ayaa sheegtay inay ciidamadoodu ay dileen 40 kamid ah maleyshiyada Shabaab iyo Daacish, kadib weeraro duqaymo oo dabayaaqada todobaadkii lasoo dhaafay ka bilowday gudaha Soomaaliya. Ciidanka Maraykanka ayaa ku qaaday...
Xulkii Talyaaniga oo Mujiso la kulmay iyo Koobka Aduunka oo laga reebay
Mjournal :-Markii ugu horreysay muddo lixdan sanno ah xulka kubadda cagta ee waddanka Talyaaniga ayaa ku guuldarraystay inuu u soo baxo ciyaaraha Koobka Adduunka. Xulkan afarta jeer ku guulaystay Koobka Adduunka ayaa waxaa barbaro 0-0 ah xalay lagu celiyay xulka Sweden, lugta...
Wasiirka arrimaha dibada oo hortagaya xildhibaannada Aqalka sare
Mjournal :-Wasiirka Arrimaha Dibadda Dowladda Federaalka Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar ayaa maanta hortagaya xubnaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya. Xubnaha Aqalka Sare ayaa su’aalo weydiinaya Wasiirka Arrimaha Dibadda Yuusuf Garaad, waxaana ay wax ka weydiinayaan...
10 ka mid ah dhaawacyadii loo qaaday Turkiga oo maanta dib dalka ugu soo noqonaya
Mjournal :-Waxaa maanta lagu wadaa in magaalada Muqdisho dib loogu soo celiyo 10 ka mid ah dhaawacyadii bishii October loo qaaday dalka Turkiga, kuwaasooo xaaladooda ay soo wanaagsanaatay. Dhaawacyadan ayaa la sheegay inay soo bogsoodeen, isla markaana ay heleen daryeel...
Mjournal :-Guddiga Doorashada Somaliland ayaa Goor dhow sheegay in la bilaabay Tirinta Codadkii ay dhiibteen Dadkii Maanta u dareeray Codbixinta Doorashada Madaxweynaha Somaliland,waxaana soo xirmay Goobihii laga dhiibanayay Codka. Xarumaha codeynta oo la furay saaka 6-dii...
Mjournal :-Shirkadaha adeegyada internet bixiya ee ka shaqeeya deegaanada Somaliland ayaa goor dhaweyd khadka ka saaray adeegsiga baraha ay bulshada ku wada xidhiidho. Shirkadaha Telesom, Somtel iyo Somcable oo ah shirkadaha internetka bixiya ayaa jaray adeegyadaasi kadib markii...